ICity ikhale ngokuxinwa eduze ithola isibhaxu sika-4-0 | isiZulu
Izinguquko zikaKomphela ziyibulele iChiefs - Dladla
Lowo owayengumdlali wasesiswini weKaizer Chiefs uJosta Dladla uthi abadlali ashintshe ngabo uSteve Komphela bayibulele iKaizer Chiefs kowomkhaya.
BUKA: Usutholakele umsuka we-Listeriosis – kusho uMnyango wezeMpilo
Usuhogeliwe umsolwa wesifo i-listeriosis, lokhu kuvezwe wuMnyango wezeMpilo ngeSonto.
ICity ikhale ngokuxinwa eduze ithola isibhaxu sika-4-0
UJosephs uyaxolisa ngokukhishwa ngekhadi elibomvu
UDe Sa ufuna ukuvula igebe lamaphuzu
Izodlalela ukufa nokuphila i-Ajax - De Sa
Cape Town – USihlalo weCape Town City, uJohn Comitis, usezwakalise ukungenami kulandela ukubhaxatshulwa kweqembu lakhe ngo-4-0 yiPlatinum Stars ngoLwesibili kusihlwa.
Leli qembu elizinze eKapa lishaywa kanjena nje belisanda kunqoba isicoco seTelkom Knockout ngoMgqibelo nalapho lishaye khona iSuperSport United ngo-2-1 ePeter Mokaba Stadium, ePolokwane.
OLUNYE UDABA: OweChiefs ufuna ukuqeda indlala yamagoli
UComitis ukhala ngokunganikezwa ithuba elanele lokuphumula yiPSL ngenxa yokuhamba ibanga elide kweqembu lakhe ngesikhathi lisuka eKapa liya ePolokwane, laphinde lasuka ePolokwane liya eKapa. Uthi uyicelile iPSL ukuthi ihlehlise lo mdlalo weStars.
“Ngacela ngaphambi kowamanqamu ukuhlehliswa kwalo mdlalo njengoba bekungenabo ubulungiswa futhi kungenasizathu ukulindela abadlali abaphezulu ukuthi badlale ezinsukwini ezintathu futhi ngemuva kowamanqamu…,” kusho uComitis.
“Angibagxeki abadlali bami. Ngidiniwe ukuthi angizange ngenze umsindo owanele ngomdlalo onobulungiswa.”
ICity izobhekana neSuperSport United emdlalweni wayo olandelayo ngoLwesihlanu, mhlaka-16 kuDisemba.
Lo mdlalo uzoqala ngo-18:00.
Isinqumo se-IAAF sicindezela intandokazi yakuleli uCaster Semenya
Ezinye izindaba... Ezemidlalo...
Ziningi izikhalazo okulindeleke ukuba zivele kulandela umbiko wenhlangano eyengamele abasubathi emhlabeni wonke jikekele.
Umqeqeshi uncome iPirates ‘ngokulandela uhlelo lomdlalo’
Umqeqeshi we-Orlando Pirates uMilutin Sredojevic uthi ujabule ngendlela abadlali bakhe abayilandele ngayo imiyalelo yakhe ngesikhathi bebeguqisa iBidvest Wits.
UMadedi uthi abadlali beChiefs kumele benze umsebenzi wabo
Ibamba likamqeqeshi weKaizer Chiefs uPatrick Mabedi liyavuma ukuthi isigameko saseMoses Mabhida sibalimaze kakhulu abadlali emqondweni, kodwa wathi akumele bahlale kuleyo nto kwazise kusele imidlalo emibili.
Kushone umakoti nabebezolekelela kulungiselelwa umshado
BUKA: Kugxekwe kabi okwenziwe yilawa maBhunu kuMEC wezemfundo eGoli
Kusafunwa isidumbu somfundi ominze olwandle kuhanjwe nesikole
Uthi uzothenga umuzi owine iLotto
Kuboshwe obelusa izinkomo 'ngokudlwengula isalukazi' e-E Cape
Cpt: 14-17°C Pta: 11-28°C
Jhb: 10-24°C Bloem: 6-23°C
Dbn: 20-24°C PE: 12-21°C
Villiers - 09:16:04 AM BUSY CONDITIONS at Wilge plaza - EXPECT DELAYS Ezinye zasemigwaqeni